लकडाउनमा चेपाङको पीडा: अपाङ्ग बुबा सहित २२ जनाको विचल्ली - दर्पण संसार
लकडाउनमा चेपाङको पीडा: अपाङ्ग बुबा सहित २२ जनाको विचल्ली
२०७८ जेठ २३, आईतबार १३:०४ बजे
चितवन । पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नं. १० लोतन्तीका रामबहादुर चेपाङ ओछ्यान परेको २ वर्ष बित्यो । सहाराको रूपमा रहेकी एकमात्र छोरी रामकुमारी चेपाङको आश्रयमा उनी बस्दै आएका छन् ।
छोरी रामकुमारीको अवस्था पनि दयनीय नै छ । ७० वर्षीय बुबालाई स्याहार गर्दै आएकी रामकुमारीले भनिन् – बिरामी र अशक्त बुबाको हेरचाह एकातिर छ भने अर्कोतर्फ २२ जनाको ठूलो परिवार आफै समस्यामा रहेको उनी बताउँछिन् ।
लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि भने ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारका सदस्य पनि काम नपाउँदा घरमै बस्न बाध्य छन् । बिहान बेलुकाको छाँक टार्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतर्फ बिरामी बुबाको उपचार कसरी गर्ने भन्ने पनि आफूलाई पिरलो परेको रामकुमारी बताउँछिन् ।
कालिका नगरपालिकाकै वडा नं. ९ को राजवन, सम्फर्‍याङ, चाइनाराङ, भ्युरान लगायतका गाउँमा पनि खाद्यान्न अनिकाल लागेको स्थानीय लक्ष्मी चेपाङले जानकारी दिइन् । स्थानीय ३५ घरपरिवार दैनिक गुजारा टार्न पनि समस्यामा रहेको उनले बताइन् ।
चेपाङ अभियन्ता तथा पत्रकार केपी किरण शर्माले सो गाउँमा चेपाङको बिचल्ली भएको बताइदै देश बिदेशमा हुने सहयोगी दाताहरुलाई उनीहरुको लागि सहयोग गरिदिन अनुरोध समेत गरे ।